विश्वलाई आतंकित बनाउने अभिब्यक्ति दियो उत्तर कोरियाले, अब के गर्ला अमेरिकाले ? – Etajakhabar
विश्वलाई आतंकित बनाउने अभिब्यक्ति दियो उत्तर कोरियाले, अब के गर्ला अमेरिकाले ?
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दीको कानुन पारित गरेको थियो । उत्तर कोरियालाई उसको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेगरी भन्दै मङ्गलबार लगाइएको सो नाकाबन्दीको विरोधमा उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । अमेरिकाको प्रस्तावमा त्तर कोरियाका विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दीलाई उसले दुष्ट कामको संज्ञा दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सोमबार सर्वसम्मत निर्णय भएपछि उसले भनेको थियो– यसका विरुद्धमा अमेरिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २८, २०७४ समय: १७:५७:३०